ဒီမိုကရေစီ | Save Burma
Posts Tagged ‘ဒီမိုကရေစီ’
“ဖြေကြည့်ပါ” မေးခွန်းနှင့် အဖြေ
ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုပြီ
“ပြည်သူလူထုမှာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိနေသင့်သည်။ သို့သော် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်သူတို့၌ လူထုထံ မပေါက်ကြားအောင် လျှို့ဝှက်ရမည့် ကျင့်ဝတ်လည်း ရှိသည်။ ဥပမာ- လိင်ဆက်ဆံဖျော်ဖြေရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တခု၌ အသုံးချခံနေရသည့် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးငယ်တဦးအား ရဲက ကယ်ဆယ်လိုက်သော သတင်းကို လူထုသိအောင် ဖော်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသတင်းတွင် ထိုကလေး၏ ရုပ်ပုံ၊ နာမည်၊ လိပ်စာနှင့်တကွ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို မီဒီယာကျင့်ဝတ်အရ လျှို့ဝှက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် သတင်း အချက်အလက်များကို အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်ကာ အမြဲတမ်း ပွင့်လင်းစွာဖြင့် ရေးသားပြောဆို ဖော်ထုတ်ရဲမှုများလည်း ရှိနေရပါမည်။”
မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးဆန္ဒတခုကြောင့် အခြားသူတွေ ထိခိုက်နစ်နာသွားမလား ဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိထားဖို့ လိုနေပါပြီ။ အခြားသူတွေ ထိခိုက်နစ်နာဖို့ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လည်း ရှိနေဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ မိမိလုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စအတွက် မိမိမှာသာ တာဝန်ရှိပြီး တာဝန်ခံယူရဲတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေလည်း မွေးတတ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
from hein <hein.heinhein@gmail.com>
to MyanmarGTalker <myanmargtalkers@googlegroups.com>,
date Sun, Dec 21, 2008 at 2:55 PM
subject [MMgtalkers:3139] အသိဥာဏ်မရှိသောကလေးများအား တိုက်ခိုက်နေသူများ
mailing list <myanmargtalkers.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list
i dont care anything. not even about their children.
if u care so much, open an orphan house and raise the kids there.
Tagged with ကျင့်ဝတ်, ဒီမိုကရေစီ
Download PDF to-create-a-good-government-that-values-fair-justice-and-re280a6
Tagged with စစ်အစိုးရ, တရားဥပဒေစိုမိုးမှု, တရားရေးစနစ်, ဒီမိုကရေစီ, နအဖ
Download PDF: 22-11-2008-burmese-junta-worse-than-british-colonialiste280a6
Tagged with စစ်အစိုးရ, ဒီမိုကရေစီ, နယ်ချဲ့, အာဏာရှင်, ထောင်
နအဖ လုပ်ရပ်များ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျ
Download PDF – spdcs-undemocratic-ways.pdf
Tagged with ဒီမိုကရေစီ, နအဖ